မြန်မာ့စီးပွားရေး အရှိန်ဟုန် ကောင်းလာမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မြန်မာ့စီးပွားရေး အရှိန်ဟုန် ကောင်းလာမယ်
(140715) -- YANGON, July 15, 2014 (Xinhua) -- Workers load vegetables at the Thiri Mingalar wholesale market in Yangon, Myanmar, July 14, 2014. Myanmar attracted 176 million U.S. dollars in foreign investment last month, thus bringing the nation's total contracted foreign investment to 46.71 billion dollars as of June 2014 since 1988 when Myanmar opened its door to the outside world, local media reported last Sunday. (Xinhua/U Aung)
မြန်မာ့စီးပွားရေး အရှိန်ဟုန် ကောင်းလာမယ်
မြန်မာစီးပွားရေးဟာ လက်ရှိအချိန်နဲ့ မကြာမီကာလမှာ အရှိန်ကောင်းလာမယ်လို့ OBG (OxfordBusiness Group) က ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့ပဋိပက္ခ နဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှေးကွေးတာကြောင့် မြန်မာစီးပွားရေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်းက စိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများရှိခဲ့ပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တောင့်တင်းတဲ့ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်အလားအလာကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း OBG က သုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ သုံးသပ်ချက် ထဲမှာ IMF (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေ ကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)ခန့်မှန်းချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှာ စီးပွားရေးတိုး တက်နှုန်း ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုထားပါတယ်။
၂၀၁၇ မှာ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး နိုင်ငံ ၏စုစုပေါင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန် ဖိုး (GDP) ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အဲဒီ ကဏ္ဍက နိုင်ငံရဲ့ ပို့ကုန်ပမာဏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး လုပ်သားအင်အား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်ကိုင်ပေးထားပါတယ်။
မွနျမာစီးပှားရေးဟာ လကျရှိအခြိနျနဲ့ မကွာမီကာလမှာ အရှိနျကောငျးလာမယျလို့ OBG (OxfordBusiness Group) က ခနျ့မှနျးခဲ့ပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာဖွဈခဲ့ပဋိပက်ခ နဲ့ စီးပှားရေးပွုပွငျပွောငျးလဲမှုနှေးကှေး တာကွောငျ့ မွနျမာ စီးပှားရေးကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ အတှငျးက စိုးရိမျမှုတှရှေိခဲ့ပါတယျ။
စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုမြားရှိခဲ့ပမေယျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ၈၈ ရာခိုငျနှုနျးဟာ တောငျ့တငျးတဲ့ ပွညျတှငျး ဈေးကှကျအလားအလာကို ပျိုငျဆိုငျထားကွောငျး OBG က သုံးသပျဖျောပွထားပါတယျ။
အဆိုပါ သုံးသပျခကျြ ထဲမှာ IMF (အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငှေ ကွေးရနျပုံငှအေဖှဲ့)ခနျ့မှနျးခကျြ အရ မွနျမာနိုငျငံ ဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ်ဍာ နှဈမှာ စီးပှားရေးတိုး တကျနှုနျး ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုငျနှုနျး ဆိုထားပါတယျ။
၂၀၁၇ မှာ စိုကျပြိုးရေး ကဏ်ဍ ပိုမိုကောငျးမှနျလာပွီး နိုငျငံ ၏စုစုပေါငျး ကုနျထုတျလုပျမှုတနျ ဖိုး (GDP) ၃၈ ရာခိုငျနှုနျးရှိပွီး အဲဒီ ကဏ်ဍက နိုငျငံရဲ့ ပို့ကုနျပမာဏ ၂၃ ရာခိုငျနှုနျးရှိပွီး လုပျသားအငျအား ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကို အလုပျကိုငျပေးထားပါတယျ။
Previous articleတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ လူငယ်ရေးရာကော်မတီတွေ စတင်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်(ရုပ်/သံ)
Next articleမြန်မာနိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်မတဲ့ ဆေးဝါးအတုတွေကို အရေးယူမယ်